Isku Dayagii Fashilmay ee SNMta | allsanaag
Isku Dayagii Fashilmay ee SNMta
Isku deygii beesha Isaaq ay ku damacsanaayeen ineey ka hirgeliyaan diiwaan gellinta gobolka Sanaag ayaa ku dhamaaday fashil iyo kalla yaac. Fashilintaas lagu sameeyay qorshayaashii beesha Isaaq, ayaa waxaa iska leh amaanteeda guud ahaan shacabka Puntland, gaar ahaana dadka deegaanka oo si toos ah oga hor yimid arrintaas.
Si kastaba ha ahaatee, SNMta marna joojin meeyso damacooda ku wajahan gobolada Sool iyo Sanaag. Waxaana ugu weeynaan doona damacooda sheegashada dhulkaas oo ah fakir ay qabaan dhamaan beesha Isaaq yar iyo weeyn, caamo iyo ciroole, sheikh iyo shaydaan.
Ineey sheegashada dhulkaas ay ku soo dhiiradaan SNMta sababteeda ugu weeyn waxaa iska leh qaar ka mid ah oday dhaqameedyada beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli ee iyagu u hibeeyay dhulkoodii iyo dadkoodii beesha Isaaq, badalkeedana ku iibsaday xoogaa shilimaad ah.
Shilimaadka ay beesha Isaaq ku duleeysay odayaal dhaqameedyadaas ayaa ka mid ah lacagaha Qaramada Midoobey iyo Yurubiyaanka ay ku bixiyaan 5tii gobol ee Soomaaliland la isku oran jiray.
Tusaale, haddii Yurubiyaanku ay bixiyaan 20 milyan oo dollar, waxaa odayaashaan la iibsaday laga siiyaa boqol kun oo dollar, waxaana sagaal iyo toban milyan iyo sagaal boqol oo kuna wax looga qabtaa dhulka beesha Isaaq. Hase ahaatee, odyaashan maskaxdoodu ay maqasho shilimaadka ayaa laga dhaadhiciyey in lacagaha la siiyo ee xaqal jeebka ah ay tahay mid ka timid jeebka beesha Isaaq.
Isku soo duub, dadka Sool iyo Sanaag deggan waxaa horyaal hawl adag oo ku aadan sidii ay wax uga qaban lahaayeen masiirkoodii lagu iibsaday shilimaadka.
← Dawaladda HAG Waraysiga Saciid Uurcad →